भारतमा किन बढ्दै छ नवजात शिशुको मृत्यु ? - Naya Patrika
भारतमा किन बढ्दै छ नवजात शिशुको मृत्यु ?
एजेन्सी, नयाँदिल्ली | असोज २१, २०७४
भारतका विभिन्न अस्पतालमा पछिल्ला समयमा शिशुहरूको रहस्यम मृत्यु हने गरेको छ । अस्पतलामा शृंखलाबद्ध रूपमा नवजात शिशुको मृत्यु हुन थालेपछि आम भारतीयको चिन्ता बढेको छ । पछिल्लोपटक उत्तरपूर्वी राज्य आसामको एक सरकारी अस्पतालमा जन्मिएका नवजात शिशुमध्ये २४ घन्टाभित्र आठजनाको मृत्यु भएको छ ।
आसामको सरकारी अस्पताल फखारुद्दिन अलि अहमद मेडिकल कलेजमा ती शिशुहरूको मृत्यु भएको हो । अज्ञात रोगका कारण शिशुको मृत्यु भएको सो अस्पतालका चिकित्सकहरूले बताएका छन् । आसामको बारपेटा जिल्लामा रहेको सो अस्पतालमा बुधबार ४ जना र बिहीबार ४ को मृत्य भएको थियो ।
अक्सिजनको कमिले उनीहरूको मृत्यु भएको अस्पतालका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । तर, अस्पतालको दाबीलाई स्थानीय नागरिक र पीडितहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । चिकित्सकको लापर्बाहीले शिशुहरूको मृत्यु भएको सर्वसाधरणरले आरोप लगाएका छन् । तर, अस्पतालहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण नवजात शिशुहरूको मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले बताउँदै आएको छ । उपचार प्रक्रियामा कुनै लापर्बाही नभएको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
अस्पतालमा अहिले अरू दर्जनाँै शिशुको स्वास्थ्य जोखिममा परेको बताइन्छ । चिकित्सकहरूले उक्त अस्पतालमा जन्मिँदै अक्सिजनको कमी भएका, आवश्यकभन्दा कम तौल भएका र अन्य स्वास्थ्य जटिलताका कारण शिशुहरूको मृत्यु भएको जनाएको छ ।
गम्भीर अवस्थामा रहका उनीहरूलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो छ । शिशुको मृत्युबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आसामका स्वास्थ्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले अस्पताललाई निर्देशन दिएका छन् ।
शिशु मृत्युको कारण पत्ता लगाउन र आगामी दिनमा त्यस्ता घटना नदोहोरिन दिन मन्त्री शर्माले अस्पताललाई निर्देशन दिएका छन् । ‘चिकित्सक एवं स्थानीय अस्पतालका अधिकारीहरूले लापर्बाही भएको हो वा होइन भन्ने सत्य तथ्य पत्ता लगाउन युनिसेफका विज्ञहरूलाई पनि अनुसन्धान समूहमा समावेश गरेका छौँ, ’ मन्त्री शर्माले भने ।
गत महिना मात्र भारतको उत्तरप्रदेशको एउटा सरकारी अस्पतालामा ४९ बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूको मृत्युबारे युपी सरकारले अनुसन्धान गरेको थियो । तर, त्यसको तथ्य बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन । अक्सिजन, आवश्यक औषधि र उपकरणहरूको अभावमा शिशुहरूको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । बालबालिकाको मृत्युबारे अझै पनि अनुसन्धान भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालको नवजात शिशु विशेष हेरचार कक्षमा मात्र ३० बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, अन्य १९ शिशुको भने जन्मिने क्रममा मृत्यु भएको हो । उत्तर प्रदेशका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा केही समययता नवजात शिशुको मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ । शिशु मृत्युको विषयमा अनुसन्धान तीव्र पािरएको उत्तर प्रदेश राज्यका सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
उनका अनुसार सो अस्पतालमा त्यति ठूलो संख्यामा के–कसरी बालबालिकाको ज्यान गएको छ भनेर खोजी गरिनेछ । यस विषयमा सर्वसाधारणमा व्यापक मात्रामा चासो बढेको छ । उनीहरूले संगठित रूपमा नै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।